Tani waa tutorial faahfaahsan oo ku saabsan sida loo isticmaalo ee Windows Movie Kan sameeyey, in la abuuro iyo sixiddiisa aad video clip. Waxaa kaloo jira macluumaad kale oo la siiyaa sidii meesha aad kala soo bixi kartaa oo dajiyo barnaamij iyo sidoo kale shuruudaha gaarka ah. Ka sokow in, waxaad ku baran doonaa oo ku saabsan fursadaha in ay sidoo kale soo bixi Suite buuxda ee Windows Muhiimka ah (2012) oo ka kooban codsiyada kale ama si fudud Windows kaliya Kan sameeyey Movie laftiisa. Marka la eego qaab file ouput u video aad abuuray ayaan ka, si aad u hesho in ka badan oo ka mid ah qaabab file kala duwan iyo sida aad ku badbaadin karto ama iyaga loogu badalo si loo waafajiyo aad loo maqli karo doorashada. Noqon doonaa in ay awood Waxaad u daawado on go ah ku saabsan qalabka aad mobile , soo dir nuqul ka mid ah video in aad qoyskaaga ama saaxiibadaa ku disc ah indhaha ama xataa geliyaan oo waxay wadaagaan online.
Halkee & sida loo Download
Windows Movie Kan sameeyey 2012
Double-hubi haddii barnaamijka ayaa lagu rakibay , bilow> Nooca Kan sameeyey Movie sanduuqa baaridda ku> gala
Halkee laga soo dejisan : Windows Muhiimka ah 2012
Operating System : Windows 7, 8 iyo Server 2008 Red2
Xasuusta loo baahan yahay : 1GB RAM ama ka sare
Maxaa ku jira ee Windows Muhiimka ah 2012 Suite : Rasuulka (dhaqaaqay Skype ), Kan sameeyey Movie, Photo Gallery, Mail, Writer, Safety Qoyska, OneDrive & Muuqaalka Xire Pack
Baro More About Kan sameeyey Movie >>
Tutorial for Windows Movie Kan sameeyey 2012
Dhab ahaan jira qaababka dheeraad ah ku bixiyeen in Windows Kan sameeyey Movie ah marka la barbar dhigo kuwa ku tilmaamay hoose. Waxaa fiican in aad u tijaabiso naftaada iyo sahamin additionals ah. Taasi tusaale ahaan, iyada oo lagu qoro aad webcam, shakhsi cod-badan, badbaadin video saarka kama dambays ah loo maqli on a qalab mobile gaar ah iyo si ka badan. Haddii aad qabto dhibaatooyin isku dayayaan in ay geliyaan aad files warbaahinta ay sabab u tahay qaabka file-khilaafsan, isku day inaad diinta faylasha ka hor . Ka dib markii in, aad wuxu si ay u abuuraan iyo edit aad video sida ay tutorial hoose.
Burcad Windows Movie Kan sameeyey,
Si fudud double-guji toobiye ee Windows Movie abuuray ama u tag Window ee Start button> Nooca Kan sameeyey Movie sanduuqa baaridda ku> gala. Waxaad markaas arki doonaa shaashadda sida kor ku soo bandhigay.
Waxaad sidoo kale soo dhoofsadaan kartaa warbaahinta (videos iyo sawiro) files ka qalabka ama kaliya jiidi-iyo-hoos u files eee degaanka bixiyo (oo dhanka midig ee interface ah).
Guji Edit ka dibna jar qalab si ay u dejiyaan oo aad ka bilaabi doorbidayso ama dhibic soo gabagabeeyay. Waxa kale oo aad kala qaybsan tahay kartaa video clips iyo hagaajinta xawaaraha loo maqli karo ka dib (gaabis ah ama si dhakhso ah).
Geli caption / record Sheeko
Riix iyo hay dulqabo ku saabsan video ee waqtiga, ka dibna u sii daayo si ay meesha aad rabto in ay noqon guji Araar . Nooca in aad qoraal shaashadda eegis iyo qabsato font ku bar qoofalan.
Geli kala guurka / saamaynta
Riix Animation iyo xulo qaab kala guurka ama Visual Raadka dhisay-in saamaynta (guji si aad u dalbato mid ka mid ah waxay khuseeyaan dhammaan haddii aad kala goobaha). Waxa kale oo aad qabsato karaa heerka dhalaalka saamaynta ee.
Ku dar music video
Waxaad si fudud karaan dar Music sidoo kale maktabadda xaafaddaada ama ka raadi waxay u online dhex vimeo, AudioMicro iyo Free Music Archive. Si fudud u tagaan oo ay u Options for goobaha dheeraad ah oo music ah.
Tag mashruuca dooro muuqa aad rabto in aad si waafaqsan loo maqli karo doorashada. Isla mar ahaantaa, inaad leedahay doorashooyinkan in ay xoogga saaraan aad video, music ama sheeko (la qabi karto isku dhafka audio).
Guba DVD ah, ama
Mar haddii aad dhameyso, sii soco ilaa badbaadi filimka si ay u Guba DVD ah . Ay taasi keeneysaa doonaa DVD Kan sameeyey Windows meesha aad astaysto menu iyo ku eegaan video ka hor gubanaya gal DVD ah.
Geliyaan oo ay wadaagaan video online
Haddii kale, waxaad la wadaagi kartaa video iyada oo gujinaya naadiya movie inay gogol online oo aad doorato (Facebook, YouTube, vimeo ama ka badan). Waxa kale oo suurto gal ah in aad meel u dhigto on OneDrive.
Beddelaan Qaabka Video File
The Movie Kan sameeyey Windows waxay noqonaysaa inay taageeraan kala duwan ee warbaahinta (video, audio iyo sawirka) qaabab file u rara ujeedooyin. Si kastaba ha ahaatee, in aad sidoo kale u baahan doontaa inaad kala soo baxdo ka fur-tago /-socodka ama codec loo baahan yahay si loogu saamaxo in. Haddii ma ahan waaweyn size file ah oo aan aad u noqon lahayd in welwelsan heerka tayada, habka ugu sahlan waa in loogu badalo faylasha video online . Doorashada qaabka file saarka la heli karo waxaa laga yaabaa in kastoo ay xadiday. Isla mar ahaantaa, waxaad fursad u haysataa kale oo macne ah - Video Ultimate Converter , taas oo ah si loogu badalo faylka si macno qaab file in aad u baahan tahay tafatir dheeraad ah oo ku saabsan Windows Movie Kan sameeyey wax.
Video Converter Ultimate Waxay bixisaa xawaare ah diinta aalladda-degdeg ah on top of filaayo video goobaha. Ka sokow in la taageero ee kala duwan ee la gelin iyo wax soo saarka file qaabab, waxaad yeelan doontaa in ay wax ka bedel aad video files sida Windows Movie abuuray. Waxaa sidoo kale jira qaababka dheeraad ah si ay uga caawiyaan soo bixi jecel aad online videos ka YouTube iyo video goobaha kale online caanka ah .
> Resource > Video > Guide / sida loo Isticmaal Windows Movie Kan sameeyey,